पाँच दिनकोबीचमा कसरी फैलियो इटालीमा कोरोना महामारी ? एक इटालियनको अनुभव – Nepal Japan
पाँच दिनकोबीचमा कसरी फैलियो इटालीमा कोरोना महामारी ? एक इटालियनको अनुभव
हाम्रो देशमा कोरोा आउँदैन, हामीलाई सर्दैन भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन, यो जतिबेला महामारीको रुपमा आउँछ तब सुनामी आएजस्तै रोक्नै नकिने गरी आउँछ । चीनबाट फैलिएको कारोनामाथि चीनले नियन्त्रण पायो आफ्नै तरिकाले तर बाँकी विश्वमा यसको भयावह छ ।
पछिल्लो समय युरोपेली मुलुक इटाली चीनपछि सबभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु हुने देश बन्न पुगेको छ । त्यहाँ सुरुवाती अवस्थामा गरिएको सानो गल्तीले अहिलेको रुप लिएका त्यहीका नागरिकले बताइरहेका छन् ।
मार्च १२ मा एक इटालियन नागरिकले विश्वभरका मानिसलाई सचेत गराउँदै आफ्नो देशमा भएको महामारी र कमजोरी केलाएर लामो सन्देश दिएका छन् । (रोवर्ट लिम्बुको फेसबुकबाट साभार गरिएको यो सचेतनामूलक सन्देश हामी सबैलाई उपयोगी ठानेर यहाँ साभार गरिएको छ ।
पोजिटिभ केसहरु ह्वात्तै बढ्न लागेका छन्, सबै स्कुल कलेजहरु कम्तीमा १ महिनाका लागि बन्द भएका छन्। देशमा स्वास्थ्यको इमर्जेन्सी घोषणा गरिएको छ। अस्पतालहरुमा विरामी भर्ना गर्न ठाउँ नपुगेपछी अन्य सामान्यहरुलाई हटाएर खाली गर्न लागिएको छ, रेगुलर अप्रेसनहरु क्यान्सिल गरिएका छन्, भएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको चाप धान्न सकेको छैन। रिटायर्ड भईसकेकाहरुलाई बोलाइएको छ, अन्तिम वर्ष पढ्दै गरेकाहरुलाई काममा खटाइको छ, स्वयमसेवकहरु भर्ना गरिएका छन्। सिफ्टमा काम गर्ने भन्ने नै छैन, जती काम गर्न सकिन्छ, गर्नु भनिएको छ। डाक्टर नर्सहरुलाई पनि भाईरस संक्रमण देखिएको छ, उनीहरुको परिवार, बच्चाबच्चीलाई पनि देखिएको छ। भाईरस संक्रमण जटिल भएर निमोनिया भएका विरामीहरु थुप्रीन थालेका छन्, आइसीयु चाहिने विरामीहरुको भिड बढ्न थालेको छ, तर विडम्बना आइसीयु बेड खाली नै छैन, अझ भर्ना गर्नलाई सामान्य बेडहरु पनि खाली छैन, भर्ना गरेपनी हेर्नलाई पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। यो एउटा युद्दक्षेत्र जस्तै भएको छ। डाक्टरहरुले आउने जती सबैलाई उपचार गर्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनन्, उपचारपछी बाच्ने सम्भावना जसको बढी छ, उसलाई बेड दिनुपर्ने, औषधी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा बुढाबुढीहरुले उपचार पाउने सम्भावना घट्दो छ। थोरै जनशक्ती र स्रोतले सबैलाई धान्नै नसकिने देखिएको छ। भेन्टिलेटर चाहिने सिकिस्त विरामीलाई अक्सिजन मात्र लगाएर राख्नुपर्दा मर्नेको संख्या बढ्दो छ। यस्तो तरिकाले आँखै अघी बाँच्नसक्ने र बाँच्नपर्ने विरामी मरेको देख्दा डाक्टर, नर्स विक्षिप्त छन्। तर गर्न सकिने केही छैन, पूरा सिस्टम धरासायी हुँदैछ।